Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ụsọ oké osimiri: mkpuchi mkpuchi njem dị anyị
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Resorts • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Alssọ Oké Osimiri Sandals na Resorts
Ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na-abụwanye ihe kachasị mkpa maka ndị na-eri ahịa ka ha na-amalite njem n'enweghị nsogbu gaa ebe ha na-atụ anya ọzọ. Nke a bụ ihe kpatara ya Sandals® Ebe ntụrụndụ na Ebe ezumike Beaches na-enye ndị ọbịa anyanwụ, ájá, izu ike na ọbụna inwekwu obi ike mgbe ha na-edekọ akwụkwọ maka ekele ọhụụ abụọ agbakwunyere na mmemme Akwụkwọ Obi ike. Luxury Included Resort na-enye ihe ohuru Atụmatụ Nchedo Njem - Insurance Dị Anyị, nke a na-akwado site na Trip Mate, nke a ga-azụta maka ndị ọbịa na-akpaghị aka ma bụrụkwa akụkụ nke ndoputa njem ha site na Ọktoba 6, 2020. Ọ bụghị naanị na nke a metụtara ndoputa ọhụụ, mana perk a wuru iji nyere aka mee ka uche ndị ahịa nwee ahụ iru ala Ọ na-emetụtakwa akwụkwọ ntinye akpụkpọ ụkwụ na osimiri niile dị adị tupu October 6, 2020 ma na-eme njem site na Mee 31, 2021. Ọzọkwa, ndị njem nwere ike ịkagbu njem ha n'oge ọ bụla ma jiri obi ike hazie ezumike ha n'ọdịnihu. Kagbuo Uru Nchedo * Unique Ezumike
Adam Stewart, osote onye isi oche nke Sandals Resorts International kwuru, sị: "Ndị njem na-eme atụmatụ ezumike gaa mara mma Caribbean nwere ike inwekwu obi ike karịa mgbe ọ bụla banyere njem ha na-aga paradaịs maka mmemme akwụkwọ ntụkwasị obi abụọ a."
"Anyị maara na ndị di na nwunye na ezinụlọ n'otu n'otu na-agụsi agụụ ike maka ụzọ dị oke mkpa nke Luxury Included®, anyị nwekwara obi ụtọ ịnye uru ndị a ka ha nwee ike ide akwụkwọ ezumike ha site na mgbakwunye mmesi obi ike."
Dika mba agwaetiti bidoro imeghe oke ala, Sandals Resorts ghọrọ ebe ezumike izizi imeghe ọnụ ụzọ ya gafee Caribbean. Usoro iwu siri ike nke Sandals na Beads Resorts mepụtara nyere ohere ka 12 nke ebe ntụrụndụ 18 mepee, na-egosi na Sandals na Resorts Resorts na-aga karịa ma gafee iji hụ na ndị ahịa nwere ike iji obi ike na-enwe ezumike ha, site na mbata na ịpụ. Site na mmemme atugharị akwụkwọ ya na ntụkwasị obi dị na ya, ndị njem nwere ike ide akwụkwọ ezumike ha ma lekwasị anya na ihe dị mkpa n'ezie - oge dị mma na ndị a hụrụ n'anya na ebe ntụrụndụ kachasị mma na Caribbean.
Atụmatụ Nchedo Njem - Insurance Dị Anyị!
Inye ndị ọbịa ọbụna nchebe ọzọ, Sandals and Resorts Resorts agbakwunyela Atụmatụ Nchedo Njem ọhụrụ - Insurance Is On Us Powered by Trip Mate nke a ga-azụta maka ndị ọbịa. Atụmatụ a na-enye ndị di na nwunye etinyere akwụkwọ ugbu a site na Disemba 31, 2020, gbasaa elele ahụike n'oge ezumike ha.
Ihe Atụmatụ Nchedo Njem - Insurance Dị Anyị Dị na-ekpuchi:
Ego mmefu ahụike dị ka akụkụ nke ọgwụgwọ maka ọrịa, ọnọdụ na / ma ọ bụ ihe ọghọm. A na-agwọ COVID-19 dị ka ọrịa ọ bụla ọzọ.
Mmefu njem maka ụlọ ọrụ kacha nso nwere ike ịnye ọgwụgwọ maka ọrịa ma ọ bụ mmerụ ahụ dị oke, siri ike ma ọ bụ na-eyi ndụ egwu. A na-ekpuchikwa ego njem maka ịlaghachi n'ụlọ na-esochi mbupụ ahụike mberede (ma ọ bụ mmerụ ahụ ma ọ bụ ọrịa kpuchiri ekpuchi). Uru kasịnụ nke $ 100,000 kwa mmadụ
Enweghị mwepu maka ọnọdụ ndị dị na mbụ.
Ọ bụrụ na atụmatụ njem onye ọbịa na-egbu oge n'ihi ekwela iche, ọbịa Nchedo Njem - Insurance Is On Us na-akwụghachi ụgwọ mmefu maka ụlọ ndị ọzọ, nri na njem mpaghara. Onu Kachasị Ego $ 200 kwa ụbọchị, Onye Ọ bụla na ihe ruru $ 2,800
Onweghi opekata mpe ma obu oke onwa ruru eru.
Ntinye akwụkwọ niile emere tupu Ọktọba 6, 2020 na mgbakwunye agbakwunyere nke Njem Nchedo Njem Njem Njem - Insurance Is On Us Plan anyị ga-enweta Atụmatụ Nchedo Mgbakwunye na-ekpuchi:
Enwe mkpuchi mkpuchi gbasaa maka Mberede Ahụike Mberede. Ọzọ $ 50,000 kwa onye
Mmefu Ahụike & Ọrịa Ahụike. Ọzọ $ 75,000 kwa onye
Ọ bụrụ na atụmatụ njem onye ọbịa na-egbu oge n'ihi ekwepụ iche onye ọbịa ahụ, Atụmatụ Mgbakwunye Njem Nchedo - Insurance Is On Us na-ekpuchi ihe ruru $ 2,050 kwa onye karịa.
Kagbuo Uru Nchedo *
Site ugbu a rue Disemba 31, 2020, ndị ọbịa na-ede akwụkwọ ezumike gụnyere gụnyere ezumike nke ịmara na ha nwere ike ịkagbu ezumike ha opekata mpe ụbọchị 31 tupu ha abata ma nata nkwụghachi zuru oke na ala nke ezumike ha na ntaramahụhụ efu. Ndị ọbịa na-akagbu ụbọchị 30 ruo ụbọchị 15 tupu ha abata ga-enweta nchikota nke nkwụghachi ego 50 na pasent 50 maka njem njem maka ọdịnihu nke Sandal ma ọ bụ Be Resort Resort ọ bụla n'ime ọnwa 12. Ndị njem na-enwekwa ego agbakwunyere nke ịkagbu n'ime ụbọchị 14 na ruo ụbọchị mbata maka akwụkwọ njem njem dị irè maka ọnwa 12 site na ụbọchị njem mbụ.
* A na-enye uru a site na Unique Vacations ma ọ bụghị uru mkpuchi. Uru a dị iche na Atụmatụ Nchedo Njem ọ bụla.
Sandals and Resorts Resorts na-eme ihe niile enwere ike iji nye ahụmịhe, enweghị nsogbu na enweghị ahụmịhe ka ndị ọbịa wee nwee ike ịga n'ihu na-ede akwụkwọ ezumike ha gụnyere ezumike na obi ike zuru oke. Ego Nchedo kagbuo a, tinyere atụmatụ nchebe njem - mkpuchi dị anyị na Protocols Sandal nke Platinum nke linessdị Ọcha na Protocols nke linessdị Ọcha Platinum, na-enye ndị njem ohere ịgbaga na Caribbean na ntụkwasị obi ha nwere atụ anya.
Maka ama ndi ozo banyere otu esi ede akwukwo na obi ike, gaa na:
Akpụkpọ ụkwụ: https://www.sandals.com/book-with-confidence/